paris | Otu Di na Nwunye
August 14, 2019 + inspirational, Self Improvement, Nhazi njem
November 3, 2018 + Europe, France, Nhazi njem
Ebe Kasị Mma Ị Ga-aga Na France
Mgbe ị na-eme atụmatụ ndepụta ndepụta ịwụ njem gị, onye ọ bụla na-achọ ịmata ebe ị ga-aga na nke mbụ. France bụ otu n'ime obodo kachasị mma n'ụwa mgbe ọ na-abịa ebe nkiri nlegharị anya na ejiji. A maara ya dịka ogwe aka nke ụwa; ya mere, ụdị ejiji niile na-esite n'aka France. Mba a na-ama ebe magburu onwe ya iji ... GỤKWUO
July 6, 2018 + Europe, France, kasị Popular, Nyocha, Nhazi njem
Oge 8 na Paris: Nnyocha nyocha
Ọ bụghịzi Hemingway si Paris. Ọ bụghịzi oge ahụ a na-ahụ maka ọmarịcha iko mmanya champagne na Can-Can Girls, backlit with swirling of cigare cigare na obi ụtọ. N'ebee ka ịma mma ahụ na-agagharị, anyị amaghị; ikekwe oge nke oge na oke mmiri, ma ọ bụ ma eleghị anya na ịdabere n'obodo ahụ na ihe ndị mere ochie nke na-adịghị arụ ọrụ na ndị bi ugbu a. The Paris anyị nwetara ... GỤKWUO